संक्रमण अझै उच्च- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
संक्रमण अझै उच्च
वैशाख २६, २०७८ ठाकुरसिंह थारू, रूपा गहतराज
नेपालगन्ज — कोरोना संक्रमण जिल्लामा एकाएक फैलिएपछि जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञा जारी भएको दुई साता बितेको छ । तर संक्रमण दर भने अझै उच्च छ । चिकित्सकका अनुसार निषेधाज्ञापछि संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या बढ्दो छ ।
बाँकेको नेपालगन्ज–१ मा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको अवस्था बुझ्न शनिबार घरमै पुगेका वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली । तस्बिर : रूपा गहतराज/कान्तिपुर
होम आइसोलेसन र अस्पतालमा उपचारार्थ गरेर प्रत्येक साता चार सय संक्रमित निको भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । निको हुनेको तुलनामा नयाँ संक्रमितको संख्या धेरै छ । बिहीबार बाँकेमा ८ सयभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जिल्लामा मृत्युदर पनि बढेको छ । दुई साताको निषेधाज्ञापछि पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
‘पछिल्लोपल्ट निषेधाज्ञा लगाउनुभन्दा पहिले नै कोरोनाको संक्रमण घरघरमा पुगिसकेको छ । होली, नयाँ वर्ष, मेला महोत्सव र राजनीतिक दलका ठूला आमसभा गरिएकाले कोरोना संक्रमण फैलिएको हो,’ भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल अधिकृत तथा फिजिसियन डा.राजन पाण्डेले भने, ‘निषेधाज्ञा जारी नगरिएको भए अहिलेको भन्दा झन् भयावह परिस्थिति आउँथ्यो ।’ उनले दुई साताको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको जनाए । यसैगरी संक्रमणको संख्या बढ्दै जाने हो भने निषेधाज्ञाको समयावधि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘एकै दिन आठ सय संक्रमित फेला परिरहेका छन् । पीसीआर परीक्षण गरेका मध्येमा २५ प्रतिशतमा मात्रै संक्रमण देखियो भने केही खुकुलो गर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त सयमा ८१ प्रतिशत बढीमा संक्रमण देखिन थालेको छ ।’
फागुन र चैत महिनामा परीक्षणको संख्या सरदर समान रहे पनि चैत महिनामा संक्रमण पुष्टि हुने दर भने करिब ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासनले पहिलोपटक गत वैशाख ८ गते रातिबाट एक साताका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला जिल्लाभरि एक हजार हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित थिए । तीमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै ७ सय ३५ थिए । पहिलो आदेश सकिएको एक सातापछि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । यहाँ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि बजारमा चहलपहल कम भएको छैन ।
मूल सडकमा प्रहरीले गस्ती गरे पनि भित्री गल्ली अनि चोकहरूमा भीडभाड उस्तै छ । पसलमा किनमेल गर्नेको भीड देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले कोरोना संक्रमणको दर कम गर्नका लागि निषेधाज्ञा अवधि बढाइएको बताए । सामान्य अवस्थामा भन्दा बजारमा हुने भीडभाड नियन्त्रणमा आएको उनले दाबी गरे । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, खाद्य, दूध, ग्यास पसल बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म सञ्चालन गरेका छौं,’ प्रजिअ गेलालले भने, ‘तर, साँझको समयमा मुभमेन्टलाई अझै नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ।’
संक्रमण दर बढेसँगै उनीहरूको व्यवस्थापन फितलो बनेको छ । अधिकांश सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । तर कुनै निकायसँग होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको यथार्थ जानकारी छैन । ‘कोरोनाका संक्रमितको अवस्था र मुभमेन्टलाई वडास्तरकै स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिले नै वाच गर्न सकेका छैनन्,’ अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले भने, ‘संक्रमित स्वयंले नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । एउटा संक्रमित समुदायसँग घुलमिल भइरहँदा अरूलाई पनि संक्रमण हुने सम्भावना स्वतः बढेर जान्छ ।’
गत वर्ष कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि संक्रमितहरूको अनुगमन, फलोअप, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको थियो । जसका कारण बाँकेको नरैनापुर र नेपालगन्जको जोलहनपुरमा फैलिएको संक्रमण पूर्णरूपमा नियन्त्रण आएको थियो । तर अहिले संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिँदा पनि सरोकारवालाले चासो देखाएका छैनन् । ‘संक्रमित आफैं बजार पुगेर आउँछन् । मास्क नलगाई घरघरमा पुगेर कुरा गर्छन्,’ नेपालगन्ज उपहानगरपालिका–४ गणेशपुरकी सुमित्रा विकले भनिन्, ‘उनीहरूका कारण हामी उल्टै जोखिममा परेका छौं ।’ अस्पतालले दिएको जानकारीअनुसार परीक्षण दर बढ्दै गएकाले पनि संक्रमण पुष्टि संख्या बढ्दै गएको हो ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:३०
अस्पताल चहार्दाचहार्दै जान्छ ज्यान
अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो
संक्रमण नियन्त्रणमा सुस्त प्रशासन
वैशाख २६, २०७८ अमृता अनमोल, मधु शाही
बुटवल/बाँके — हनहनी ज्वरो आयो र शरीर काप्न थाल्यो । लगातार खोकी लाग्यो । श्वास फेर्नै गाह्रो मान्न थाले । बुटवल–११ का श्रीभद्र गौतम शुक्रबार यस्तै बेचैन थिए । होम आइसोलेसनमा बसेका ५२ वर्षीय उनी आत्तिएपछि आफन्त जुटे ।
शनिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामी । तस्बिर : अमृता अनमोल /कान्तिपुर
अस्पताल लैजान रूपन्देहीका सबै अस्पताल चहारे । पोखरादेखि काठमाडौंसम्मका अस्पतालमा सम्पर्क गरे । कतै आईसीयू र अक्सिजन बेड पाएनन् । अन्तिममा शुक्रबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगे । तर, आकस्मिक कक्षमा राख्ने भुइँ पनि पाएनन् ।
करिब तीन घण्टा एम्बुलेन्समै राखेर सिकिस्तलाई साँझ घर फर्काए । उपचारको आसमा बेलाबेलामा आँखा खोल्ने श्रीभद्रका वरपर आफन्त रुनेबाहेक अरू गर्न सकेनन् । जसोतसो, साँझ बुटवल उपमहानगरपालिकाले अक्सिजनको जोहो गर्‍यो । स्वास्थ्यकर्मीले घरमै अक्सिजन लगाएर केही कम गर्न प्रयास गरे । तर, अक्सिजनले मात्रै काम गरेन । शनिबार बिहान करिब साढे ३ बजे छटपटिँदा छटपटिँदै उनको मृत्यु भयो । ‘धनसम्पत्ति, प्रतिष्ठा, पहुँच जे भए पनि कोरोनाको उपचारमा काम लागेन,’ मृतकका भान्जा लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘उपचार अभावमा छटपटिएरै मामाको ज्यान गयो । हामी रमिते मात्रै भयौं ।’
अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिँदा रूपन्देहीमा अक्सिजन अभावमा अस्पताल चहार्दाचहार्दै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । त्यसमध्येका हुन्, बुटवल–११ देवीनगरका सुन्दर सुनार । ३७ वर्षीय उनी सात दिनदेखि बिरामी थिए । शुक्रबार एक्कासि ज्वरो बढ्यो । शरीर कटकटी खायो । श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भयो । आफन्तले अटोरिक्साको जोहो गरे । शुक्रबार साँझ त्यसमै राखेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगे । अस्पतालले ठाउँ नभएको भन्दै ढोकाबाटै फर्काइदियो । भैरहवाको भीम वा मेडिकल कलेजमा लैजान सुझाव दियो ।
आफन्तले अटोरिक्सा घिसार्दै राति ती दुवै अस्पताल पुर्‍याए । तर, बिरामीले भर्ना पाएनन् । फर्काएर पुनः लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याए । अस्पतालका चिकित्सकले अक्सिजन खोजेर ल्याए आँगनमै भए पनि उपचार गर्ने बताए । रातभरि अक्सिजनको खोजीमा लागे । तर, कतै पाएनन् । अस्पतालको बाहिरी गेटमा छटपटिएर बिहान उनको मृत्यु भयो । आफन्त शव बोकेर घरतिर लागे । ‘जिउँदो छँदासम्म उपचार पाएनौं । मरेपछि लास किन अस्पताललाई बुझाउने भनेर घरै लग्यौं,’ मृतकका आफन्त रेशमले भने, ‘जति हारगुहार गरे पनि कसैले सहयोग गरेनन् । रोग लागेपछि उपचार होला र बाँचिएला भन्ने आस अब रहेन ।’
अस्पतालमा पुगेर पनि उपचार नपाउँदा एम्बुलेन्समा छटपटिएरै बुटवलमा एक जनप्रतिनिधिले समेत ज्यान गुमाएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका–७ का वडा सदस्य नवीन थापा मगरको शुक्रबार भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको प्रांगणमा मृत्यु भएको हो । ‘मेडिकल कलेजमा बेड खाली भए पनि अक्सिजन र आईसीयू नहुँदा एम्बुलेन्सको अक्सिजनकै सहारामा बाहिर चौरमा राखिएको थियो । रातभरि त्यहीं छटपटिएर बिहान मृत्यु भयो,’ उपमहानगरका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीका स्वकीय सचिव मेघराज भट्टराईले भने ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा शुक्रबार दुई जना कोरोना लक्षण देखिएका व्यक्तिले अस्पताल परिसरमै ज्यान गुमाए । उनीहरूको पीसीआर रिपोर्ट आएको थिएन । शव व्यवस्थापन नभएपछि परिवारले घरै लगे । बाँकेमा एकातिर महामारी तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन कछुवा गतिमा छ । बुधबार नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले अक्सिजन अभावका कारण बिरामी भर्ना नहुने विज्ञप्ति जारी गरेपछि समस्या चर्किएको हो ।
शनिबार प्रदेशसभा सदस्य आरती पौडेल, कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख लुटबहादुर रावल, उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी, नेता सर्य ढकाल, नरेन्द्र न्यौपानेलगायतले कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा जतिसक्दो छिटो बिरामी भर्ना गर्न अस्पताल व्यवस्थापनसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । अस्पतालका उपनिर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठका अनुसार जनप्रतिनिधि र नेताहरूले अक्सिजन उपलब्ध गराइदिए उपचार गर्न समस्या छैन । उनका अनुसार आइतबारदेखि बिरामी भर्ना लिने, अक्सिजन अभाव भइहाल्यो भने जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिने मौखिक सम्झौता भएको उनले बताए । ‘बिरामी भर्ना गराउनु भन्दै अस्पताल धाउनुभन्दा पनि अक्सिजन अस्पतालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे जनप्रतिनिधि र नेताले दौडधुप गर्नुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘उपचार नपाई अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भयो भने कसले जिम्मा लिने ?’
राज्य नै जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नदेखिएको मानवअधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । उनका अनुसार यहाँका मानवअधिकारकर्मीले छिटोभन्दा छिटो नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न, पीसीआर जाँचको दायरा बढाउन, बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालमा स्रोत जुटाउनेलगायत जिम्मेवारी पूरा गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रविरुद्ध अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले आदेशसमेत दिएको थियो । तर, प्रशासनको काम सुस्त गतिमा भएको उनले बताए ।
जिल्लामा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा संक्रमित संख्या बढेको छ । त्यस्तै, हरेक दिन कम्तीमा चार जना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले महामारीप्रति पूर्वतयारी गर्न नसक्दा स्थिति भयावह भएको मानवअधिकार आयोग बाँकेका प्रमुख शंकरबहादुर रावलले बताए । ‘मुख्य कुरा सरकारको पूर्वतयारी भएन,’ उनले भने, ‘जतिबेला समस्या भयो, उतिबेला खोजीनिती गर्दासम्म महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो ।’
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:२९